နေကောင်းသွားပြီဆိုတော့ ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တပါး လို့ ပညာပေးလိုလို သံဝေဂလိုလိုတွေများ ရေးမလားလို့ ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။
လက်စသတ်တော့ ရေခဲသေတ္တာရယ်၊ ပေါင်မုန့်တလုံးရယ်၊ ဘ၀ကို ငါရောင့်ရဲတယ် ဆိုတဲ့သဘော ရေးထားတာကိုး။ ကြိုက်သဗျို့။ ရေးထားတာရော ဂွတ်မောနင်းပေါင်မုန့်ကိုရော။ နို့ပေမယ့် ကိုယ် စားရတာမဟုတ်တော့ ဗိုက်တော့ မ၀ပါဘူး။ အင်း - - ပေါင်မုန့်တလုံး ၀ယ်ထားရဦးမယ်။ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်တာများလို့ အညောင်းမိ၊ ဖျားပြီး ပြန်နေကောင်းတဲ့အခါစားဖို့။
စားပုံသောက်ပုံက နာလန်ထနဲ့ မတူ။
ခုနောက်ပိုင်း တွေ့တာတော့ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွေ ရေခဲသေတ္တာတွေထဲ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းနြ့ အစားအစာထည့်ရင် ကင်ဆာဖြစ်တယ်တဲ့..
အဲဒီတော့ ဖန်သုံးပေါ့။ ဖန်ခွက် တွေနှင့်လည်း မိုင်ကရိုဝေ့ဖ်လို့ ရတာပဲလေ. ဟဲဟဲ နေကောင်းသွားတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။
7/23/2007 8:12 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမေရေ .. နေကောင်းနေမှ ကျွန်တော်ဘာထပ်မေးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး နောက်တစ်ခါ ဘယ်တော့မှ နေမကောင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းလေး ပြည့်ရင်ကောင်းမယ်နော် ..
7/23/2007 10:08 PM
မမေရေ .. ကဗျာလာဝိုင်းရေးပေးစေချင်ပါတယ်
7/23/2007 11:25 PM
Nar Lan Hta,asar twe theik thaung kyan ma nay ne oo byo..asar ma taw, ta hlan,athwar ma taw, ta lote,aeik ma taw, ta yay... kwe thwar oo mel... that pone le theik ma pyin ne, ma sar like ya pe pyit thwar oo mel..
7/24/2007 1:54 AM
asarr athauk sin chin onn naw.
အစ်မမေ ... ဖတ်ရင်းနဲ့ ဗိုက်တောင်ဆာလာပြီဗျာ နာလံထ မှာစားချင်ရာစားရတာလောက် ကောင်းတာ မရှိဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက အမေက ဟိုဟာနဲ့ မတဲ့ဘူး ဒီဟာနဲ့ မတည့်ဘူးဆိုပြီး တားတယ်လေ မစားဖို့ ။ ခုတော့ တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ အုပ်တာပေါ့ အစ်မရယ် ဘာပြောကောင်းမလဲ .... နည်းနည်း ခေါင်းထဲ မရှင်းလိုက်နဲ့အတင်းကို ရေထချိုးပစ် လိုက်တာပဲ အဲဒီအခါ အမေ့စကားကို အမြဲကြားမိတယ် ဟယ် မချိုးရပါဘူး ခုမှ အဖျားကျခါစရှိသေးတယ် နောက် နှစ်ရက်နေ့ မှ ရေ နွေးလေးနဲ့ စပ်ချိုး..... ကဲ အဲလို အစ်မရေ ခုတော့ အဲလိုပြောမဲ့ အမေက ဟိုးအဝေးကြီးမှာ
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်မမေ :)